महिलाले किन सम्भोग गर्छन् ? केही आश्चर्यजनक कारणहरु - Safalnews
महिलाले किन सम्भोग गर्छन् ? केही आश्चर्यजनक कारणहरु
सफल न्युज द्वारा २०७७ आश्विन १७ गते शनिबार ०९:२४ मा प्रकाशित
4 FacebookTwitterWhatsAppViberTelegramFacebook Messenger
अमेरिकाको टेक्सास विश्वविद्यालयका मनोविज्ञान विषयका प्राध्यापक सिन्डी मेस्टन र डेभिड बोसले लेखेको किताब ‘ह्वाइ वुमन ह्याभ सेक्स’ मा झण्डै २ सय कारणहरुलाई हाइलाइट गरिएको छ । यो किताब लेख्ने क्रममा शेाधकर्ताहरुले गरेको अनुसन्धानका क्रममा एक महिलाले यो सम्म स्विकार गरेकी छिन् की उनले यसकारण सेक्स गर्छिन् ता की उनको श्रीमानले आफ्नो विर्य बाहिर निकाल्न पाओस् ।
केही महिलाका सम्भोग गर्ने कारण निकै विचित्र थिए । कतिले पुरुषप्रति दया जागेर सम्भोग गरेको बताए भने कतिले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सम्भोगको उपयोग गरेको बताए- पैसा वा बहुमुल्य वस्तु हासिल गर्न ।